यी सामान्य गल्तीले बन्दैन तपाईको सिक्स प्याक ! – Sodhpatra
यी सामान्य गल्तीले बन्दैन तपाईको सिक्स प्याक !
सबैको चाहना हुन्छ कि आफ्नो शरीर आकर्षक होस् !
प्रकाशित : २९ फाल्गुन २०७७, शनिबार २०:३८ March 13, 2021
कैलालीमा घरभन्दा बाहिर निस्किदा मास्क अनिवार्य, प्रयोग नगर्नेलाई कारवाही !
उपचारको पर्खाइमा २२ दिन देखि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डडेल्धुराका दिलबहादुर !